Ukwehluleka Kwakho Ukuphendula Konakalisa Icebo Lakho Lokuxhumana Komphakathi | Martech Zone
Abantu abaku I-Brickfish, inkampani esiza imikhiqizo emikhulu ngamasu abo ezenhlalo, amaselula nawedijithali ahlanganise le infographic enikeza ukuqonda ngodaba olukhulu ezinkundleni zokuxhumana. Iningi lemikhiqizo licabanga ukuthi linikezela ngamakhasimende aphezulu ezinkundleni zokuxhumana kepha iqiniso ukuthi Ama-92% wabathengi awavumelani!
Hhawu. Sike sakusho phambilini kepha izinkampani eziningi kakhulu zithatha isinqumo sokusebenzisa imithombo yezokuxhumana ukumaketha futhi azinayo inqubo yokuhlinzeka ngamakhasimende eyenziwe. Akukhathalekile ukuthi luhle kangakanani uhlelo lwakho lwezokuxhumana lapho amakhasimende akho eqala ukuzwakala ngokuswela kwakho ukuphendula ekunakekeleni izinkinga zawo. Noma yiliphi isu lokumaketha ocabanga ukuthi lizosebenza manje selizobhujiswa ngoba izethameli zibona nje ukuthi insizakalo yakho yamakhasimende uyasondeza.
Vele, okuphambene nalokho kuyiqiniso futhi. Izinkampani eziphendulayo futhi ezenza umsebenzi ziyakwazi ukukhuthaza ukwazisa kwamakhasimende azo online. Yikuphi ocabanga ukuthi kuzoba nomthelela emizameni yakho yokuthola?
Tags: brandisitini senhlanziIsikhathi sokuphendulaukuphendulainsizakalo yamakhasimende omphakathisocial mediaimpendulo yezokuxhumana
UJun 10, 2014 ngo-9: 02 AM
Okuthunyelwe okuhle Doug !! Siyabonga ngokwabelana!